Date My Pet » Chakavanzika ane Kiss Great
Kissing ndiko kunonakidza uye kana kukaitwa zvakanaka, Masasaradzi kuchabhururuka uye iwe achasiya mudiwa wako remuromo. Asi sei iwe tora kutsvoda yako inotevera padanho? pazasi, hatina chakashama tichitarisa zvakavanzika netsvodo kukuru.
Secret #1: seka
Kutora nguva seka pamberi miromo nokukiya kunobatsira kuvaka tarisiro. Kana zviri vakabata maoko, caressing, kana vachidzipukuta pamisana, ichi chaiko kuonana pamberi chaiwo tsvodo chakavanzika zvichatibatsira kuwedzera vanhu vaiita chido pamwe kudzamisa kubatanidza wako.
Secret #2: dekara
Kissing, kunyange kana iwe zvakatsvodana kane zana, inogona kunyatsonanga tsinga anonetsa zvikuru. Chinokosha kuzorora. Rangarira kufema zvakadzama, hwomutambarakede pfungwa dzako, uye kutenda pachako.
Ita zvinhu nemiromo yako kunze kutsvodana. Yakayamwa kana zvinyoronyoro nibbling vamwe vako miromo achava nechokwadi kuti kuvadzinga anopenga zvepabonde makakatanwa. Chimwe chidobi muromo-chakabatikana ndiko kumhanya muromo rurimi rwako inyaya yakakomba pamusoro miromo yavo. Kana kutsvoda wako anoita danda, kusiyanisa muedzo uye kumhanya kutsvoda kunobatsira kuti pave kufara sezvo mumwe wenyu haazorambi kuziva zviri kuuya rinotevera.
Secret #4: nzeve, mhino, Eyes, uye Neck
Nepo vachikisana ari yemanyorero rinotarisa kumativi miromo kuti handiyo chete nzvimbo unofanira kufunga. Vachikisana vamwe vako nenzeve, cheki, mhino, uye maziso ose kubatsira kutsausa zvake kutsvoda kupinda kudanana mufaro. Kana uchida kuti asapindire naro mumwe notch, edza playfully dzichiruma divi rezasi renzeve kwavo uye mutsipa. Vanongogara chaiyo makwapa izvi kungadaro nezvekufadza itsva uye manzwiro kuti uchawedzera nekuchiva uye kusimba nezvedambudziko rako nokusveta.
Secret #5: kutsamwa
Nepo apa zvakavanzika kunogona kubatsira vakatendeuka munhu kuva kisser chikuru, mukuru chakavanzika zvose rinobva dzenyu kunetsa uye riine mumwe wako. Kuti uone mafayawekisi apo kutsvodana, yenyu kutaura kune mumwe. Nokuudzawo yepedyo nyaya uye nendangariro, kutya uye chinzvimbo, uye kurega manzwiro ako vechokwadi vanoratidza nzira dzose kutora ukama hwako padanho rakadzama. Nepo itsva iyi, kunetsa achakuisa pangozi, uyu ndiwo mukana mumwe achava zvakakodzera.
Kusveta inzira yokuratidza yako chaiyo munhu anoshamisa madiro dzinorevei kwauri. With zvakavanzika izvi, Chiito ichi hwepedyo kunogona kuchinja ukama wako kuti kubatana kwakadzama zvamunoda.